Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Kuwait osimiri: al-Khiran - ebe ezumike maka ịnọpụ
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • News • Technology • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị njem nleta na ndị bi na Kuwait kwesịrị ịhapụ ebe ezumike a na-akpọ al-Khiran na Kuwait.
Kuwait lụrụ ọgụ na Sọnde iji chịkwaa mmanụ na-asọda na mpaghara ndịda ya nke merụrụ osimiri ya, na-eyi egwu imebi ụlọ ọrụ ike na ọdụ mmiri, wee hapụ ogologo oji ojii na Gulf Persia.
Bogbọ mmiri na ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-etinye booms n'ime mmiri iji nwaa ịnwe ihe wụfuru. Ndi ochichi choro ichedo uzo mmiri, osisi ike na mmiri, buru uzo kpochapu osimiri ndi gbara ya gburugburu, dika akuko banyere ulo oru mgbasa ozi nke KUNA.
Khaled al-Hajeri, onye isi oche nke Green Line Society nke Kuwait, kwuru na ụlọ ọrụ na-enweghị uru gburugburu ebe obibi na-ejide gọọmentị maka mmebi ọ bụla ma ọ bụ mmetụta ahụike nke nfufu ahụ.
"A ga-enwe nsonaazụ dị egwu nye ndị na-ahụ maka ihe a mere, anyị ga-ekpekwa ha ikpe," Sheikh Abdullah al-Sabah, onye otu onye na-achị ezinụlọ.
Ndị ọchịchị dị nso na Saudi Arabia etinyela atụmatụ ihe omume mberede iji mee ihe banyere mwụfu ahụ ma na-eduzi nyocha ikuku site na mpaghara ahụ, dị ka nkwupụta nke ụlọ ọrụ Saudi Press Agency na-achịkwa.
Operationslọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na Saudi Arabia nke dị na Khafji kwuru na ụlọ ọrụ ndị ahụ emetụtaghị mgbapụta ahụ.
Kuwait kwuru na ụlọ ọrụ mmanụ mmanụ America bụ Chevron Corp. na ndị ọkachamara n'ihe banyere mmanụ na-enye mmanụ na mkpocha mmanụ. Chevron, nke dị na San Ramon, California, na-arụ ọrụ ubi n'akụkụ abụọ nke oke.
Mpaghara dị na Kuwait bụ ebe obibi mmanụ na gas gas nke Kuwait na Saudi Arabia keere. Forcesfọdụ n'ime mpaghara ndị ahụ ama ama ka ndị agha Iraq gbagburu site na njikọ ndị US na-edu na 1991 Gulf War nke kwụsịrị ọrụ Saddam Hussein nke mba ahụ.